Iziseko zeMveliso eNtsha zihanjisiwe kwisiXeko saseYangzhou, kwiphondo laseJiangsu
Iziseko zeMveliso eNtsha zakhiwa kwisiXeko saseYangzhou, kwiPhondo laseJiangsu, China, zigubungela indawo engama-25000m2. Imveliso entsha ayivelisi kuphela ipaneli yamandla elanga ene-210mm, kodwa ikwaqulathe enye imveliso ephezulu yelanga njenge-166mm series (M6) kunye ne-182mm series (M10). Unyaka omtsha siza stor ...
Inkqubo yoLanga kunye noQeqesho lokuFakelwa kwe-EPC
Inkqubo yeSolar kunye noQeqesho lokuFakela i-EPC Ukwenza ngcono iinkonzo zabaxumi bethu, iApex ilungiselela uqeqesho lwetekhnoloji kunye noqeqesho lokufakwa kwe-EPC yeQela lokuThengisa. Umxholo woqeqesho ubandakanya ulwazi lobuchule ...
INkomfa yeTekhnoloji yeNkqubo yeLanga ye182mm
Kutheni le nto iPhaneli yeSola eneSeli eziSikwa ngesiqingatha seLanga ithandwe kangaka？ Apex Solar umgca wemveliso omtsha one- # 182mm #modules uzakwaziswa ngoMatshi kunyaka ozayo. Namhlanje sithathe inxaxheba kwiimodyuli ze-182mm kunye nenkomfa yetekhnoloji yenkqubo hel ...
Ukubonelelwa kwelanga nge-Apex ukuya kwi-1.2MW
Apex Solar Supply To 1.2MW Apex Solar supply 1.2MW of solar panel for ukufaka iiphaneli elanga eluphahleni. Iipaneli zelanga zelanga ezingama-380w asihambelani kuphela nomgangatho olungileyo weepaneli zelanga, kodwa sikwazisa ngokukhawuleza ngaphakathi kweentsuku ezi-3-7 ...
Kutheni le nto iPhaneli yeSola eneeseli eziSikwa ngesiqingatha selanga zithandwa kangaka?
Kutheni le nto iPhaneli yeSola eneeseli ezikwisiqingatha seSolar Solar ithandwa kangaka panel Iphaneli yelanga eneebhasi ezininzi yamkela itekhnoloji yegridi yeebhasi ezininzi Itekhnoloji yegridi yeebhasi ezininzi isebenzisa uyilo lwe-cell grid yeselfowuni yokuphucula ukusebenza kwe-c. ..